Faah-faahin dheeraad ah oo laga helaayo weerarkii maanta ka dhacay Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah-faahin dheeraad ah oo laga helaayo weerarkii maanta ka dhacay Muqdisho (SAWIRO)
Waxaa faah-faahin dheeraad ah laga helayaa laba weerar ismiidaamin ah oo maanta lagu qaaday xarunta ciidanka booliska dambi-baarista CID-da ee ku taala agagaarka KM4 ee magaalada Muqdisho.
Weerarkaasi ayaa sida la sheegay ahaa 2 qarax ismiidaamin ah, waxaana kadib xigay rasaas xoogan oo ay is-dhaafsanayeen ciidanka booliska iyo kooxihii weerarka soo qaaday.
Ciidanka booliska ayaa u suuro gashay inay toogtaan 3 ka mid ah kooxihii weerarka kusoo qaaday saldhiga, iyadoona 4 kale oo kooxdaasi ka tirsaan ay ku dhinteen labadii qarax oo lagu weeraray albaabka hore ee xarunta.
Agagaarka goobta uu weerarka ka dhacay ayaa lagu arkayaa meydad badan, waxaana ay meydadkaasi yihiin dad shacab ah oo sida la sheegay saarnaa gaadiidka dadweynaha iyo mootada bajaajka oo maraayay agagaarka xarunta.
Inta la xaqiijiyay waxaa weerarkaasi ku geeriyootay ilaa 13 qof oo ay ku jiraan 7 qof oo ka mid ah nimankii weerarka soo qaaday, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay tiro intaasi ka badan.
Dhinaca kale, saraakiisha ciidanka amaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo saxaafadda kula hadlay goobta uu weerarka ka dhacay ayaa sheegay in ciidanka dowladda ay dileen nimankii weerarka soo qaaday oo 3 qof ahaa halka 4ta kalena ay ku dhinteen labadii qarax oo lagu weeraray albaabka hore ee xarunta.
Si kastaba ha ahaatee, qaraxaan ayaa kusoo beegmaya xilli shan maalin kahor labo qarax oo ismiidaamin ahaa ay ka dhaceen agagaarka garoonka diyaaradaha iyo xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho, kaasi oo mid ka mid ah uu fuliyay Ex xildhibaan Saalax Bad-baado oo hore uga tirsanaa baarlamaankii KMG ee Soomaaliya.